Ururka Xabad joojinta ee dhowaan la sameeyey ayaa shir deg deg ah isugu imaanaya kadib markii dagaal ba,ani ka qarxay magaalada Muqdisho.
Dagaalada magaalada Muqdsiho oo ilaa 12 qof ay ku dhinteen .
Nairobi,02 March 2003 - - Ururka cusub ee dhowaan la sameeyey oo loo sameeyey inay talaabo ka qaadaan kooxaha somaalida ee jabiya xabad joojintii lagu heshiiyey ayaa kulan deg deg ah isugu yimid khamiistii kadib markii dagaal ba,an oo u dhexeeya labada nin ee sida ba,an isaga soo horjeeda ee ku hardamaya xaafada Madiina ee magaalada Muqdsiho.
Ururkaas ayaa waxa si wada jir ah u sameeyey US, EU, AU, Ururka Jaamacada Carabta iyo IGAD - ayaa ku kulmay xarunta cusub ee shirka loo soo raray ee Mbagathi taaso ku taal duleedka magaalada Nairobi.
Waxay ka wada hadleen sidii loo saari lahaa cunaqabatayn xaga safarada ah,kooxaha jabiyeyey heshiiskii ku saabsanaa in colaada la joojiyo,heshiiskaas oo ay kooxaha dhamaantood wada saxiixeen xiligii uu shirku bilowday oktoobar sanadkii tegey.
Waxaa kulankaas loogu gogol xaaray kulan deg deg ah oo ay isugu imaan doonaan wasiirada arimaha dibada ee Djibouti, Kenya iyo Ethiopia dawladahaas safka hore ee ku bahoobay ururka IGAD,kuwaasoo ah dawladaha shirka dib u heshiisinta soomaalida wada.
Kulanka caadiga ah ee wasiirada arimaha dibada ee IGAD ayaa dhici lahaa Sabtiga balse dawlada Jabuti ayaa codsatay in kulankaas dib loo dhigo ayada oo cudur daar ka dhigatay in wasiirkoodii uu hawlo kale ku mashquulsan yahay.
Dagaal aad u baa, ayaa maalintii arbacadii ka qarxay xaafada madiina ee magaalada Muqdisho,dagaalkaas oo u dhexeeya maleeshiya iska soo horjeeda oo ka soo jeeda qabiilka Abgaalka,kuwaas oo ay kala hogaamiyeen Cumar Finish iyo Muse Suudi Yalaxow.Dagaalka ayaa socdey ilaa maalintii khamiistii,ilaa 12 qof ayaa ku dhintay dagaalkaas,inkaloo badanina waa dhaawacantay.Dad aad u badan ayaa ka qaxay meelihii dagaalku ka dhacay.
Khamiistii ayaa Mr Finish oo ku sugan Nairobi wuxuu wadahadal la yeeshay ninka dhowaan loo doortay inuu hogaamiyo shirka soomaalida u socda ee Bethwel Kiplagat. Yalahow wuxuu isagu ku sugan yahay Mogadishu.
Xaalada magaalada Laascaanood oo kacsan kadib dagaal u dhexeeya laba malayshiyo oo ka dhacay magaalada maalintii Jimcihii.
Laascaanood,02 March 2003 - Wararka naga soo gaadhaya magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in magaaladaasi uu maalintii jimcihii,markuu shaacu madoobaaday uu ka dhacay dagaal ay isaga hor yimaadeen laba malayshiyo oo labaduba ka soo jeeda dadka u dhashay deegaankaas,dagaalkaas oo sababay dhimasho iyo dhaawacba.
Dagaalkaas ayaa bilowday kadib markii malayshiyo uu wato ninka lagu magacaabo Xasan Geerash oo gacansaar la leh maamulka Somaliland uu habeenimadii khamiistii 27 jan uu soo galay magaalada isagoo ka yimid dhinaca Waqooyi galbeed.Wax yar kadib waxaa la toogtay nin,warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in malayshiyada Xasan Geerash ay geysteen dilkaas,kadib beeshii uu ka dhasahay marxuunkaas ayaa weerar ku qaaday meeshii ay ku sugnaayeen malayshiyada Xasan Geerash,halkaana waxaa ka qarxay dagaal ba,an oo la isu adeegsaday hubka culus.Dagaalkaas ayaa sababay in ay ku dhintaan 2 nin oo ka tirsan malayshiyadii Xasan Geerash,iyadoo 2 nin ee dhintay mid ka mid ahi uu ku geeriyooday magaalada Berbera oo isagoo dhaawac ah la geeyey,ilaa 2 qof oo kale ayaa dhaawac ah.
Xaalada magaalada ayaa kacsan dagaalkaas kadib,waxaa magaalada ku soo batay dhalinyarada qoryaha sidata,dadkana waxaa ka muuqda welwel ay ka qabaan in dagaalku mar labaad sii qarxo,balse waxaa hada arinta gacanta ku haya odayaasha magaalada oo u kala dab qaadaya beelaha ay ka soo jeedaan malayshiyooyinka iska soo horjeeda.
Dhinaca kale ninka lagu magacaabo Axmed Xasan Guure(Raan)oo ka mid ahaan jirey saraakiisha hogaamisa ciidamada Puntland ayaa tegey magaalada Hargeysa,isaga oo sheegay in uu ka soo goostay maamulka Puntland oo uu hada daacad u yahay maamulka Somaliland.Mr Axmed Raan ayaan isagu wax masuuliyad ah ka hayn ciidamada Puntland wakhtiyadii ugu danbeeyey isagoo ka tirsanaa saraakiishii taageertay maamulkii Jaamac Cali Jaamac,markii uu Cabdillaahi Yuusuf uu dib u qabsadayna wuxuu Mr Raan u soo cararay magaalada Laascaanood,oo uu ku sugnaa hada in mudo ah,ma jiraan wax ciidamo ah oo la socday Mr Raan oo u galay dhinaca Somaliland.